Black-Apple Black Prince: nkọwa nke mkpụrụ osisi apụl dị iche iche, ịkọ ihe + na nyocha - Osisi - 2020
Osisi Apple Black Prince - Dutch aristocrat n’ubi gị
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị apụl ụlọ, ndị na-elekọta ubi na-ahọrọkarị eto eto apụl nke nhọrọ mba ọzọ. Otu n'ime ụdị ewu ewu ma mara mma bụ Black Prince (ma ọ bụ Red Johnprinz), sitere na Holland ma mara mma nke mkpụrụ osisi na-acha ọbara ọbara mara mma na-enweghị atụ.
Nkọwa nke Black Prince dị iche iche na njirimara ya
Black Prince di iche di iche na egosiputa na Russia dika odi na nso nso a, ma obu otutu ndi nwere ubi nwere mmasi nihi ya.
Ebee ka apụl ojii apụl si na ebe ha na-eto
Akụkọ banyere osisi apụl Onye isi ojii adịghị ogologo, ma jujuo afọ. Ọ sitere n'ụdị dịgasị iche a ma ama Jonagold, bred n'etiti narị afọ gara aga site n'aka ndị America na-azụ ahịa. N'ihi nnabata nnabata ụkọ, ụba oke na ịkọwapụta, Jonagold meriri Europe ngwa ngwa, wee rụọkwa ọrụ dị ka ntọala maka ịkụ ọtụtụ elekere, nke bụ ugbu a ihe dị ka 100. Otu n'ime ụmụ Jonagold nwere ihe ịga nke ọma bụ ụdị Wiltons Red Jonaprints (ma ọ bụ Jonagold Red Prince) A maara Russia dị ka Onyeisi ojii. A na-egbute ụdị dị iche iche na Netherlands na 1994.
Red Johnprinz dị iche iche nwetara ewu ewu n'ihi ịma mma nke mkpụrụ osisi na ezigbo ụtọ
N'ụbọchị ndị a, eto apụl Black Prince na-eto n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile dị na Europe, yana na Ukraine na na mpaghara ndịda Russia. Ọ na-eto eto ahịa na Canada (Ontario). Abatabeghị ụdị ndị ahụ na ndekọ steeti ahụ; ebe ọ bụ na 2015, ọ nọ na ule steeti dị iche iche.
Nkọwa na njiri mara nke ụdị dị iche iche
Onye isi ojii bụ etiti mmalite nke ụla na-amị mkpụrụ n'ime afọ iri nke ikpeazụ nke Septemba - mbido Ọktọba.
A na - amata osisi dị oke uto na mmalite nke ndụ, mgbe ahụ ọ na-eto eto na-agbadata ka ọ na-ajụ, n'ihi nke osisi toro eto na-ahụ ka ọ dị obere. Ubi nye ndụmọdụ na-eto ha na dwarf rootstocks.
Red johnprinz apple orchard na ngwaahịa dwarf - vidiyo
Odide na-apụta ụbọchị 2-3 tupu nke ụdị Golden Delicious na Golden Rangers dị iche iche. Ekwesịrị iburu n'uche na Black Prince enweghị ikike ime onwe ya, ya mere, a gha akụ osisi na saịtị ahụ. Ekwesịrị icheta na Onye isi ojii, dị ka ụmụ niile Jonagold bụ triploid, ya bụ, ọ nwere chromosom atọ nwere okpukpu atọ. Njirimara a na-eme ka ihe ndi ozo di iche karie nke skaab, na-ekpebi ntinye nke ihe ubi, ma na-eme ka o sie ike ịhọrọ pollinators. Varietiesdị kachasị dabara maka nke a bụ Brabern, Elstar, Pinova, Gala, Golden, Junami. Ha ekwesịghị ịbụ ihe karịrị ọkara osisi apụl Black Prince.
Ndị na-eme ifuru osisi apụl Onye isi ojii nwere foto
Osisi apụl New Zealand Gala bụ otu n'ime ụdị ahịa ụwa na-achọkarị.
Osisi Apple Brabern sitere na New Zealand
Elstar bu nkpuru Dutch nke mbu nwere otutu nkpuru
Mkpụrụ osisi ndị ahụ gbara agba, gbara gburugburu, nwee nnukwu nha (ịdị elu ruo 200 g, dayameta ruo 10 cm) na mbara ihu. Akpụkpọ ahụ na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ọbụna na ụfọdụ shading, apụl ndị anyanwụ na-enwu nke ọma na-acha ọbara ọbara. A na-ese mkpụrụ osisi ndị ahụ obere n'oge - ama na June, bee ahụ na-amalite ịtụgharị ọbara ọbara. Dọkpu dense ahụ nwere ihe owuwu mara mma ma na-ese ya na agba na-acha odo odo. ,Tọ dị ụtọ, udara uto uto na-ekele nke ukwuu.
A na-amakarikwa agwaetiti a site na agba agba na-enwu enwu.
E jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ, mkpụrụ osisi Red Johnprinz nwere ọtụtụ shuga, vitamin na antioxidants. Ọzọkwa na apụl ndị a, enwere ọtụtụ calcium, magnesium, ígwè na phosphorus. Yabụ, a na-atụ aro ka Black Prince apụl kwalite usoro nri nri, yana n'ihi ntakịrị obere kalori, a na-etinye ha n'ụdị nri dị iche iche maka oke ibu.
Uru na ọghọm nke Black Prince dịgasị iche iche
Varietydị dịgasị iche iche ka akachasị mara na-atụle uru na ọghọm ya.
Uru nke dịgasị iche iche gụnyere:
oge uto (osisi apụl na-amalite ịmị mkpụrụ site na afọ 3-4 nke ndụ, ịmị mkpụrụ zuru oke na-esite n’afọ nke isii);
owuwe ihe ubi mgbe nile ma hie nne;
ahia mara mma na uto nke nkpuru osisi;
ezigbo ụgbọ njem na ịdịte aka;
ọrịa na-eguzogide ọgwụ.
Na ụkọ ihe ụfọdụ nke iche:
mkpa maka iji nlezianya họrọ pollinators;
obere odibo siri ike
mkpụrụ mmiri shredding na ezughi oke atọ.
Ntkụnye Osisi Black Prince dị iche iche
Iji nweta ezigbo mkpụrụ nke apụl Black Prince, ịkwesịrị ị paya ntị na oge ị kụrụ.
General ndụmọdụ na preplant
Iji dobe osisi apụl, họrọ saịtị nwere ala na-eme nri. Ihe kachasị adabara bụ mgbanye ọkụ. Ọ bụrụ na ala anaghị eju nri na nri, ọ dị mkpa ịzụlite ya - mee nri fatịlaịza n’okpuru olulu miri (bọket 3-4 kwa 1 m2 ma ọ bụ ahịhịa rere ure). A na-arụ ọrụ a ọnwa 6-7 tupu akuku.
Canghaghi nkpuru osisi apụl n’ebe ebe mmiri adịghị. Ọ bụrụ na saịtị ahụ dị na ala dị larịị, ịkwesịrị ịkụ osisi n'elu ugwu nke wuru ewu. I nwekwara ike igbapu ebe a.
Ọdụdọ DIY - video
Mgbe ị na-ahọrọ seedling, a ga-akwụrịrị nlebara anya pụrụ iche nye steeti mgbọrọgwụ (ha ga-etolite ma na-agbanwe), ebe grafting (ekwesịghị inwe ihe ịrịba ama nke ire ere, mkpọda), akụkụ niile nke seedling kwesịrị ịdị na-agbanwe, na ogbugbo kwesịrị ịdị na-emebi emebi.
Ekwesịrị ịkwadebe olulu ahụ tupu oge eruo, ma ọ dịkarịa ala izu 2-3, yana ọkacha mma ọnwa 2-3 tupu ịgha mkpụrụ. Ogo nke olulu ahụ kwesịrị ezu iji hụ mmepe nke usoro mgbọrọgwụ. Mgbe obula, olulu maka ido osisi apụl ka eji omimi nke 0.8 m, dayameta nke 0.8-1 m. Mgbe ị na-akụ ụrọ, a ga-etinye olulu mmiri nke gbajiri agbaji ma ọ bụ gravel na ala nke olulu ahụ, a ga-etinyekwa oghere na bọket 1-2 ájá. Ọ bụrụ na ala bụ aja, na ala nke olulu ịchọrọ itinye akwa ụrọ 8-10-cm ga-ejide mmiri. Mgbe ahụ olulu a nwere oge nri na-agwakọta nke ala ịnyịnya, ash, compost na mgbakwunye nke otu njuaka nke superphosphate. A na-etinye ala fatịlaịza na ala dị ọcha iji kpuchido mkpa nke seedling ahụ n'ọkụ..
Iji hụ na nri ga-ezuru gị, osisi apụl gbara agbata obi kwesịrị ịdị n ’anya nke 3.5-4 m site na ibe ha.
Mgbe ị na-akụ seedling, ị ga-agbasochi ndụmọdụ ahụ anya - bee ma ọ bụ mebie akụkụ nke osisi ahụ, jujuo ebe nwere ihe ọkụkụ ma kụọ osisi ahụ n'ime ya ma echefukwala ịkụnye seedling ahụ n'osisi mgbe ị kụrụ ya mmiri ma waterụọ ya mmiri
A na-egbutu osisi ogologo 140-150 cm n'ime etiti olulu ahụ.
Nyochaa mkpụrụ, na-egbutu mgbọrọgwụ ya na ahịhịa. Tupu akuku, mikpuo nkata nke nkpuru osisi apụl ka ọ bụrụ ụrọ (i nwere ike tinye ya mkpali uto ya).
N'elu ebe a na-akpụ akpụ akpụpụtara site na ngwakọta na-edozi ahụ, a na-etinye osisi nke nwere mgbọrọgwụ gbasaa.
Mgbakwunye nke mkpụrụ osisi na-ejupụta, na-ejide ogwe ahụ n'ọnọdụ kwụ ọtọ ma na-awụpụ ya obere ka oghere niile dị n'agbata mgbọrọgwụ wee jupụta na ala.
Jiri ukwu gị were okporo ụkwụ kechie ala (i kwesiri itinye ụkwụ gị n’elu mkpịsị ụkwụ).
Jiri eriri dị larịị kechie ọkpọ ahụ.
A na -emere onye na-eme mkpọlarị site na ala site na anya nke 30 cm site na ogwe osisi ahụ ma jiri bọket 2-3 nke mmiri edozi.
Nhọrọ nke osisi apụl na akuku ya na vidiyo
Atụmatụ nke ịkụ na ụzọ aghụghọ nke nlekọta
Teknụzụ maka osisi apụl na-eto eto Red Johnprinz dị mfe ma dị iche na nzụlite ụdị osisi apụl ndị ọzọ.
Njirimara nke itolite na mpaghara dị iche iche, gụnyere ndị gbara ya gburugburu
Osisi apple Onye isi ojii di nma maka ịkụ ahihia na otutu akuku -23 ... -29 banyereC, ya bụ, a gaghị agagharị karịa mpaghara ntu oyi na-eguzogide 5.
Dịka ọmụmaatụ, na Ukraine, enwere ike kụrụ Black Prince na mpaghara niile site na Transcarpathia ruo Lugansk.
Na Belarus, naanị mpaghara Brest dị mma maka osisi apụl a.
Na Russia, Crimea, Stavropol Territory, Krasnodar Territory, Mpaghara Rostov ruru eru maka ịkọ ụdị. Maka ọnọdụ nke Mpaghara Russia, Red Johnprinxty adabaghị. Y’oburu n’inwe udiri iguzogide iku nkpuru osisi apple a, i kwesiri itolite ya n’omume di ala ma obu nke igbo, ka inwere ike inye ihe mkpuchi n’oge oyi.
Ilekọta mkpụrụ osisi apụl Onye isi ojii gụnyere ọrụ ịkpụ, ịsa mmiri, ịkọ nri na ịtọhapụ ala.
A na - eme ya - ịkpụzi ya na idebe ihe ọcha - kwa afọ, na oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Bido n’afọ na-eso ịghachara, i kwesiri ibido kpube okpueze. Emekarịrị okpueze okpueze nwere okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ. Nwa ndi isi ojii di nfe na iribiga ya nkpuru, yabụ okpueze a ghaghi igbachapu kwa afo, na ewepu ahihia nile. N'ime usoro ịkpụzi, ọ dị mkpa ijide n'aka na ngalaba ndị isi nwere akụkụ ọpụpụ nke opekata mpe 45 (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri oghere ma ọ bụ ihe nkwado dozie akụkụ ọpụpụ). A ga-ahụrịrị iwu nke subordination nke alaka na onye na-eduzi etiti, a ga-ebipụ ome niile.
Ozo nke okpueze okirikiri na-ewe afọ 3-4
Gbara mmiri na nlekọta ala
Ebe ọ bụ na nha nke apụl Red Johnprinz bụ nke ukwuu dabere na ịgbara mmiri. need mkpa inyocha ala mmiri. You nwere ike ị na-agba mmiri ndị ahụ na etinye aka ma ọ bụ n'osisi nke ogwe osisi. Kwafu dịkwa mma. A na-agba mmiri na-eto eto eto nke afọ 1 nke ndụ kwa izu na ọnụego 1-2 bọket mmiri kwa 1 osisi. Na afọ, ugboro nke ịra mmiri na-agbadata ma maka ndị okenye, osisi apụl chọrọ naanị 1 atọ kwa ọnwa (ọ na-agba mmiri naanị na ihu igwe dị oke ọkụ). Enwere ike ịmejupụta okpomoku na omimi nke 0,5 m na okpokoro gburugburu na anya nke 0.6-0.7 cm site na ogwe ahụ. Nwere ike ị dobe ahihia mmiri n'ubi ahụ.
Mee N'onwe Gị nta mmiri - video
Mgbe ịgbarachara mmiri, ngwa ngwa ala kpọnwụrụ, i kwesịrị mepụta loosening ma mulch okirikiri akpati. Mulching bụghị naanị ejigide mmiri, kama ọ na-egbochi igbokwa. Ala site na gburugburu stem gburugburu kwesịrị ịdị ka o kwere mee kpochapụ ahịhịa ma gwuo ala. Nwere ike iji ngwakọta nke ahịhịa ga-agha mkpụrụ nke wara wara, ma jiri ahihia a kụrụ n'osisi.
Dressingkwa akwa elu mgbe niile ga-enyere osisi apụl aka itolite ma kụọ nnukwu mkpụrụ. N'afọ mbụ, ọ bara uru inye nitrogen ahụ osisi na-eto eto iji mee ka uto ya. A na-etinye Urea (3 tablespoons kwa 1.5 bọket mmiri) n'okpuru osisi na-eto eto na mmalite oge opupu ihe ubi. Nwere ike ịgba osisi apụl ugboro atọ ugboro atọ site na iji sodium humate (20 g kwa bọket mmiri) na ọnụego 2 lita kwa 1 osisi.
Site na afọ nke abụọ, a na-agbakọba apụl apụl ugboro abụọ n'afọ, na oge opupu ihe ubi na ụbịa, ya na fatịlaịza dị mgbagwoju anya (dịka ọmụmaatụ, Nitrofoska) na organics (compost, humus) maka igwu ala.
Nri osisi apụl - vidiyo
N'ihi oke ikuku siri ike n'oge oyi, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikpuchi ihe Black Prince maka oge oyi. Iji hụ na ezigbo oyi dị na ngwụcha ọnwa Ọktọba, a na-eme mmiri ịgbapụta mmiri na ọnụego 60-80 mmiri dị n'otu osisi.
Tupu mmalite nke ihu igwe oyi, a na-agbanye boles na ogwe osisi ruo ihe dị elu nke 1.5 m na ihe ọkụ (agrofabric, akwụkwọ, ahịhịa), na iji kpuchido usoro mgbọrọgwụ nke ahịhịa mulch si na ahịhịa ma ọ bụ peat na-awụkwasị na okirikiri ahụ. Ọ bụrụ na snow adaa, ọ dị mkpa ibugharị ya n'osisi ahụ, kpoo ma jiri osisi kwụ ọtọ ma gafee ogo 30-40. N'oge opupu ihe ubi, ọ dị mkpa iji wepu ma snow ma mulch.
Onye dere akwụkwọ a ejirila usoro nke iji ahịhịa akpọnwụ akpọnwụ iji chebe osisi apụl na ntu oyi. A na-eme nke a mgbe mmalite nke frosts mbụ dị nro. A na-etinye stampụ, ogwe ya na isi nke alaka ọkpụkpụ na mpempe akwa ọ bụla, na elu - 2 akwa akwụkwọ ọcha na-acha ọcha, nke a na-ejikọta ya nke ọma na twine. Na steeti a, osisi apụl na-anabata ntu oyi. Uwe elu nke mmiri na microelements (zinc na cobalt sulfates, potassium permanganate, boric acid) na-emekwa ka nguzogide ntu oyi.
Iji chebe mkpanaka, a pụrụ ichebe osisi apụl site na iji nchara ma ọ bụ lapnik jiri eriri ahụ.
Na-akwadebe osisi maka oge oyi - vidiyo
Ọrịa na nje na nchebe megide ha
Na agbanyeghi eziokwu na osisi apụl dị na triploid na-enwekarị ike iguzogide ọrịa, Black Prince nwere ike ibute ọrịa ndị dị ka skaab, mildew powdery, na ire ure. Ihe ilu metụrụ emetụta karịsịa.
Ọkpacha ahụ nke nje fungal na-emetụta ahịhịa, mkpụrụ osisi na Ome nke apụl, karịchaa na ihu igwe mmiri. Mkpụrụ osisi na-emetụta emetụta anaghị abụ naanị ngosipụta ha, kamakwa njigide ha. Na mgbakwunye, a na-ebelata vitamin C n'ime ha. Maka mgbochi nke ọrịa, ọ dị mkpa iwepu akwụkwọ dara ada n'oge, na-edebe ala n'okpuru osisi ahụ ma soro iwu nlekọta. Ọ bụrụ na mmiri dị mmiri, n'oge mmeghe nke mkpụrụ osisi na-efesa na Bordeaux ngwakọta nke 3% (ịgba "acha anụnụ anụnụ"). N'ime mpaghara kpọrọ nkụ, enwere ike iji 1% Bordeaux. N'oge ịgbatị nke buds, ọ ga-ekwe omume iji ọgwụ mgbochi nke HOM, Cuprosil, Strobi mee ọgwụ mgbochi. Mgbe okooko osisi gasịrị, ekwesịrị iji ọgwụgwọ nke Skor, Rubigan, Horus mesoo osisi.
Scab na-emetụta ọdịdị nke apụl
Icha uzuzu pụtara dị ka ihe mkpuchi na -acha ọcha dị ka akwụkwọ na Ome. Site na mmebi dị ukwuu, ọ nwere ike ibute ịba ụba na arụpụtaghị ihe site na 40-60%, yana mbelata nke isi ike n'oge oyi. Dịka ihe mgbochi na nchedo, ejiri mmiri mmiri Bordeaux fesaa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ fungicidal na-eji ya ugboro atọ.
Sprays ndị ọzọ yiri ya na-enye aka megide ire ere.
Ọgwụgwọ osisi apụl sitere na ọrịa fungal - vidiyo
Oge dị ilu na-abụkarị enweghị calcium. N'okwu a, ịba ụba nke potassium ma ọ bụ fatịlaịza ndị ọzọ nwekwara ike iso kpata ụjọ ilu. Ya mere, iji gbochie ọrịa ahụ, ọ dị mkpa iji nlezianya debe fatịlaịza nke fatịlaịza, yana ị na-emeso osisi ahụ na nhazi nke calcium chloride.
A na-ahụkarị ahụhụ dị ukwuu nke osisi apụl bụ nla nla, nla, osisi bee-apụl, nla apụl. Iji chebe osisi site na ahụhụ ndị a, ọ na-atụ aro ka ndị na-elekọta nnụnụ na-akụ n’elu alaka osisi apụl. O nwekwara ike iji ọgwụgwọ mgbochi nke osisi nwere oke nje (Decis, Confidor).
Owuwe ihe ubi, idebe ya na iji ya
Apụl na-agbakọ ọnụ na ngwụsị Septemba (ọ na-abụkarị ụbọchị 6-7 tupu nke ọma). Nwere ike ịnakọta ha n'otu nzọụkwụ. Ọ bụrụ n’ịchịkọta ha n’oge, ndụ ihe nchekwa nke mkpụrụ osisi ahụ ga-abụ nke ka njọ, na uto agaghị enwe oge iru ọkwa ahụ kwesịrị ekwesị. Ntozu oke ahịa na-abịa na Nọvemba.
A na-anabata apụl nke ọma n'ihi oke ọkụ ya na anụ ahụ siri ike. Can nwere ike chekwaa ihe ọkụkụ ahụ ruo ọnwa 2-3 n’ụlọ okpomọkụ, ọnwa 5-6 - na friji na ọnwa 9-10 n’ụlọ nkwakọba ihe pụrụ iche. Maka nchekwa ụlọ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbanye mkpụrụ osisi na igbe na-emighị emi, na akwa 2-3 (a na-etinye akwụkwọ na akwụkwọ ma ọ bụ ahịhịa dị nro).
A na-atụ aro ịchekwa apụl n'ime igbe na-emighị emi
Dị ka ọ na-adịkarị, a na-ata apụl Black Prince dị ọhụrụ ma ọ bụ dịka akụkụ nke salads mkpụrụ osisi, mana ị nwere ike iji ha maka achịcha, jam na ihe ọ andụ fruitụ mkpụrụ osisi.
Ule ndi n’ubi
Red Johnprinz ... N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ n'ime ndị enyi m nwere nkụda mmụọ n'ụdị dịgasị iche iche a - nke kachasị n'ihi nzụkọ na-esote karịa ntozu Jonagold, ntu oyi ma ọ bụ obi ọjọọ n'oge oyi. Obi m na-ewute ya na ọtụtụ ndị na - adịghị ahụ ọfụma nke usoro ihe omume Jonagold, uto na-adịghị ike. Afọ abụọ n’usoro n’otu enyi ya na mpaghara Lisyansky, mpaghara Cherkasy.matarasị Gala Mast. Mgbe agbapụtasịrị, ọ kwụghị n’elu osisi ogologo oge; a hụrụ ọkwa dịkarịrị ngwa ngwa, mmepe nke ọrịa anụ arụ, gụnyere ndepụta okwu ...
Enwere m obi nkoropụ, Jonagored, Decosta, Red Jonaprint maka ihe ụfọdụ, obere, 50 mm. A kụrụ osisi na ọdịda nke 2013. Varietiesdị ndị ọzọ na-atọ ụtọ, ebe nha ọ bụla dị mma.
Red John Prince bụ otu n'ime klọọkụ ọhụrụ nke Jonagold, enwere m ya, ụdị ahụ ahụ dị ka mmepụta okike. Dị ka ọ dị na ngwaahịa ọhụrụ niile, ha chọrọ ugbu a iritekwu ego na ya.
Osisi apụl Black Prince n'ọtụtụ ụzọ dị elu karịa ụdị ndị ọzọ ma ọ chọghị nlekọta dị mgbagwoju anya. Nyere ha uda siri ike n'oge oyi, ọ na-achọsi ike itolite na osisi ndị a na mpaghara ọkụ, ma ọ bụrụ na a ga-achọ okpomoku maka oge oyi.